(၇)ရကျသားသမီးအားလုံး ‘အိမျထောငျရေး’ ‘အခဈြရေး’ သာယာစဖေို့အကောငျးဆုံးယတွာမြား
တဈခြို့လူတှေ အခဈြရေး အိမျထောငျရေးကွောငျ့ စိတျဆငျးရဲနကွေရတယျ။ ယောကျြား ကောငျးရငျ မိနျးမက မကောငျးဘူး။ မိနျးမက ကောငျးပွနျတော့ ယောကျြားက မကောငျးပွနျဘူး။
အဲ့ဒီလို အိမျထောငျရေး အဆငျမပွမှေုတှေ သာယာ စိုပွမှေု ကငျးဝေးနတောတှအေတှကျ စိတျညဈစရာတှပြေောကျပွီး သုခခမျြးသာ ဖွဈစဖေို့ (၇) ရကျ သားသမီးမြား လုပျနိုငျတဲ့ ယတွာ ကောငျးတဈခုကို တငျပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘုရားသောကျတျောရခှေကျအောကျမှာ မိမိခဈြသူ (သို့မဟုတျ) အမြိုးသားရဲ့ ဓာတျပုံကို ကပျထားပါ။
၂။ ငနျးအဖွူ ဖိုမ နှဈကောငျပုံ အိမျမှာကပျထားပါ။
၃။ နှဈယောကျဓာတျပုံကို မကျြနှာခွငျးဆိုငျကပျပွီး ဓာတျဘူးထဲမှာထညျ့ထားပါ။
၄။ နားကပျကို ရစေိမျပွီး တိုကျပါ။ ၅။ ခွရောမွမှေုနျ့ ကိုယူပွီး နကွောပငျ စိုကျပါ။
၆။ ကြောကျစလဈခဲ ကို ဂုဏျတျောကိုးပါးရှတျပွီး ခေါငျးအုံးထဲမှာ ထညျ့ထားပေးပါ။
၇။ နှဈယောကျနနေံ့ ပနျးကို ပေါငျးပွီး နှီးနဲ့ခညျြပွီး အိမျဘုရားမှာ မကွာခဏ လှူပေးပါ……။
သူ့ရဲ့နနေံ့ပနျးပှငျ့ကို ရခှေကျထဲမှာ ထညျ့ပွီးဘုရားမှာ မကွာခဏ လှူပေးပါ။ တနင်ျဂနှေ….. အုနျး (၆) ညှနျ့ သို့ အုနျးပနျး(၆)ခကျ, တနလာင်္….. ကံ့ကျော(၁၅) ညှနျ့/ပှငျ့,
အင်ျဂါ…… ဇျောစိမျး သို့ စံပယျ(၈)ပှငျ့/ ညှနျ့, ဗုဒ်ဓဟူး….. ရှကျလှ (၁၇) ညှနျ့ သို့ ရှပေနျး (၁၇) ပှငျ့, ကွာသပတေး…. မမွေို့(၁၉)ပှငျ့, သောကွာ….သပွေ(၂၁) ညှနျ့ သို့ သစ်စာပနျး(၂၁) ပှငျ့, စနေ…..နှငျးဆီ (၁၀)ပှငျ့…
အဲ့သလို လုပျရုံနဲ့ မိမိရဲ့ အခဈြရေး အိမျထောငျရေးမှ တဖွညျးဖွညျး သာယာစိုပွလောပွီး အကောငျးဘကျကို ရောကျလာ ပါလိမျ့မညျ။ ယုံယုံကွညျကွညျနှငျ့ လုပျပါ။ တဈဆငျ့စီ စနဈတကလြုပျပါ။ အခဈြရေး အိမျထောငျရေး အတှကျ အကောငျးဆုံး ယတွာ ဖွဈပါတယျ။
ဆရာသာထကျဆနျး ကြိုကျဝိုငျးဘုရား၊ ၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅
တစ်ချို့လူတွေ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်။ ယောက်ျား ကောင်းရင် မိန်းမက မကောင်းဘူး။ မိန်းမက ကောင်းပြန်တော့ ယောက်ျားက မကောင်းပြန်ဘူး။
အဲ့ဒီလို အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေ သာယာ စိုပြေမှု ကင်းဝေးနေတာတွေအတွက် စိတ်ညစ်စရာတွေပျောက်ပြီး သုခချမ်းသာ ဖြစ်စေဖို့ (၇) ရက် သားသမီးများ လုပ်နိုင်တဲ့ ယတြာ ကောင်းတစ်ခုကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘုရားသောက်တော်ရေခွက်အောက်မှာ မိမိချစ်သူ (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ထားပါ။
၂။ ငန်းအဖြူ ဖိုမ နှစ်ကောင်ပုံ အိမ်မှာကပ်ထားပါ။
၃။ နှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ကပ်ပြီး ဓာတ်ဘူးထဲမှာထည့်ထားပါ။
၄။ နားကပ်ကို ရေစိမ်ပြီး တိုက်ပါ။ ၅။ ခြေရာမြေမှုန့် ကိုယူပြီး နေကြာပင် စိုက်ပါ။
၆။ ကျောက်စလစ်ခဲ ကို ဂုဏ်တော်ကိုးပါးရွတ်ပြီး ခေါင်းအုံးထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါ။
၇။ နှစ်ယောက်နေ့နံ ပန်းကို ပေါင်းပြီး နှီးနဲ့ချည်ပြီး အိမ်ဘုရားမှာ မကြာခဏ လှူပေးပါ……။
သူ့ရဲ့နေ့နံပန်းပွင့်ကို ရေခွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီးဘုရားမှာ မကြာခဏ လှူပေးပါ။ တနင်္ဂနွေ….. အုန်း (၆) ညွန့် သို့ အုန်းပန်း(၆)ခက်, တနလာင်္….. ကံ့ကော်(၁၅) ညွန့်/ပွင့်,
အင်္ဂါ…… ဇော်စိမ်း သို့ စံပယ်(၈)ပွင့်/ ညွန့်, ဗုဒ္ဓဟူး….. ရွက်လှ (၁၇) ညွန့် သို့ ရွှေပန်း (၁၇) ပွင့်, ကြာသပတေး…. မေမြို့(၁၉)ပွင့်, သောကြာ….သပြေ(၂၁) ညွန့် သို့ သစ္စာပန်း(၂၁) ပွင့်, စနေ…..နှင်းဆီ (၁၀)ပွင့်…
အဲ့သလို လုပ်ရုံနဲ့ မိမိရဲ့ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှ တဖြည်းဖြည်း သာယာစိုပြေလာပြီး အကောင်းဘက်ကို ရောက်လာ ပါလိမ့်မည်။ ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် လုပ်ပါ။ တစ်ဆင့်စီ စနစ်တကျလုပ်ပါ။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာသာထက်ဆန်း ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား၊ ၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅